अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा. खतिवडा अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस — onlinedabali.com
अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा. खतिवडा अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस
काठमाडौँ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको लागी नेपाली राजदुत नियुक्तको लागि सिफारिस गरिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी राजदूतमा डा. खतिवडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भदौ १९ गते शुक्रबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका डा. खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । सक्तारुढ नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई सिफारिस गरेपछि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । डा. खतिवडा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बनाएका थिए । नेपालमा पटक–पटक फेरिने सरकारमा विज्ञहरुले मन्त्री बन्न नपाइरहेका बेला डा. खतिवडा ओलीको क्याबिनेटमा सोझै अर्थमन्त्री बनेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भइसकेका खतिवडा । नेकपा सचिवालयले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेपछि अब अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको कार्यकाल थपिने सम्भावना सकिएको थियो । त्यस पछि उनले बाध्य भएर राजीनामा दिएका थिए ।